Colace vs. Dulcolax: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी चेकआउट मनोरञ्जन प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट समाचार भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Colace vs. Dulcolax: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Colace र Dulcolax दुई अति-काउन्टर (OTC) औषधी हो जसले कब्जको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। कब्ज एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवस्था हो जुन प्रति हप्ता तीन वा थोरै आन्द्रा चालहरू भएको, कडा वा गठाउने मल, पास गर्न गाह्रो स्टूलहरू, वा तपाईंले पूर्ण रूपमा स्टूल पास गर्नुभएको छैन भन्ने भावनाबाट हो। मल त्याग्ने बानी एक व्यक्तिबाट फरक फरक हुन्छ। कब्जको अनुभव गर्ने बिरामीले पेटमा ब्लोटिंग वा दबाबको भावना वर्णन गर्न सक्दछ।
कब्ज सामान्य छ र शिशुहरू, बच्चाहरू, र वयस्कहरूलाई असर गर्न सक्छ। यो अनुमान गरिएको छ प्रत्येक १०० अमेरिकीहरूमा १ 16 कब्जबाट ग्रस्त त्यहाँ बिरामीहरूको केहि समूहहरू हुन्छन् जसले बढी कब्जाहरूबाट ग्रस्त हुन्छन्। यसमा उमेर वयस्कहरू, महिलाहरू, गैर-काकेशियाहरू, कम फाइबर आहार खाने बिरामीहरू, र केहि अन्य औषधिहरूका बिरामीहरू समावेश छन्।
जबकि यो लेखले केवल Colace र Dulcolax तुलना गर्दछ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा विभिन्न काउन्टर रेचकहरू छन्। कस्तो प्रकारको रेचक तपाईंको लागि सही हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्न हेल्थकेयर प्रोफेशनलको चिकित्सकीय सल्लाह खोज्नुहोस्।
Colace र Dulcolax को बीच के मुख्य भिन्नताहरू छन्?
कोलास (डकुसाट सोडियम) कब्जको लक्षणहरूको उपचार गर्न र राहत दिन एक ओभर-द-काउन्टर औषधी हो। कोलास एक सर्फेक्टन्टको रूपमा काम गर्दछ र स्टूलमा तेल र पानीको सतह तनाव कम गर्दछ। यसले लिपिड र ओसलाई मलमा छिर्न अनुमति दिन्छ, नरम मल उत्पादन गर्दछ जुन जठरांत्र पथमार्फत सजीलो सार्न सक्छ। कोलास स्टूल सफ्टनरको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ तर रेचक मानिदैन किनकि यसले सीधा गतिलाई उत्प्रेरित गर्दैन। मल नरम हुनको लागि एकदेखि तीन दिन लाग्न सक्दछ त्यसैले कोलासले कब्ज लक्षणहरूको द्रुत राहत प्रदान गर्दैन। Colace (Colace के हो?) Mg० मिलीग्राम र १०० मिलीग्राम मौखिक सॉफ्टफेल क्याप्सुल, र १० मिलीग्राम / मिली र 60० मिलीग्राम / १ml मिलीलीटर मौखिक समाधानहरूमा उपलब्ध छ। त्यहाँ ग्लिसरीन सपोसिटरीहरू र स्टूल सफ्टनर र रेचक संयोजनहरू पनि कोलास ट्रेड नाम अन्तर्गत उपलब्ध छन्।
Colace मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
कोलास मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
Dulcolax (bisacodyl EC) एक कब्जा को लक्षणहरु को उपचार र राहत गर्न प्रयोग एक over-the-काउन्टर औषधी हो। डुलकोलेक्स एक रेचक छ र आन्द्राको म्यूकोसा जलन गरेर पेरिस्टेटिक आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्दछ। यो उत्तेजना शारीरिक रूप बाट स्टूल को माध्यम बाट मल सार्छ। Dulcolax आफ्नो चाहिएको प्रभाव कोलास भन्दा अधिक चाँडो उत्पादन गर्दछ, सामान्यतया मौखिक प्रशासनको साथ -12-१२ घण्टा भित्र। Dulcolax (Dulcolax के हो?) इन्टरिक-लेपित mg मिलीग्राम र १० मिलीग्राम ट्याब्लेटको साथै १०mg मलाशय कोशिकामा उपलब्ध छ। त्यहाँ मल नर्मन र अन्य उत्पादनहरू Dulcolax व्यापार नाम अन्तर्गत उपलब्ध छन्।
औषधि वर्ग मल नरम उत्तेजक रेचक
जेनेरिक नाम के हो? Doconate सोडियम बिसाकोडिल ईसी
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक सॉफ्टटेल, मौखिक समाधान मौखिक एन्टिक-लेपित ट्याब्लेटहरू, गुदाशय सपोसिटरी
मानक खुराक के हो? एक १०० मिलीग्राम सॉफ्टगेल दैनिक दुई पटक, अधिकतम mg०० मिलीग्राम प्रति दिन एक १० मिलीग्राम सपोसिटरी एक पटक दैनिक, हप्तामा अधिकतम days दिन
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? एक हप्ता वा कम, जबसम्म अन्यथा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्देशित एक हप्ता वा कम, जबसम्म अन्यथा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्देशित
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू २ बर्ष र अधिक उमेरको, वयस्कहरू बच्चाहरू years बर्ष र माथिका, वयस्कहरू
सर्तहरू Colace र Dulcolax द्वारा उपचार
कोलास् कब्जको उपचार र यसको रोकथाम दुबैमा संकेत गरीएको छ। कहिले काँही कब्ज एक हप्ता भित्रमा समाधान गर्नुपर्छ। कोलास सामान्यतया स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशनमा लामो अवधिसम्म लिन सुरक्षित छ र अन्य औषधीहरू वा कब्जको कारणले परिचित सर्तहरूसँग सम्बन्धित कब्ज रोक्न सल्लाह दिन सकिन्छ।
Dulcolax कहिले काँही कब्ज को उपचार मा मात्र संकेत गरीन्छ। उत्तेजक गतिशीलताको यसको संयन्त्रले केही असुविधा निम्त्याउन सक्छ। यो केवल एक हप्ता सम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ जबसम्म स्वास्थ्यकर्मी द्वारा निर्देशित नभएसम्म।
सर्त रोटी Dulcolax
कब्ज रोकथाम हो हैन
कब्जको उपचार हो हो (कहिलेकाँही)
के Colace वा Dulcolax अधिक प्रभावी छ?
Colace र Dulcolax मा सक्रिय अवयव कब्ज को उपचार मा प्रभावकारिता को लागी प्रत्यक्ष तुलना क्लिनिकल परीक्षण मा तुलना गरिएको छैन।
प्रत्येक औषधिको बारेमा धेरै कारकहरू छन् जब तपाईको लागि के सही छनौट गर्दा दिमागमा राख्नु पर्छ। एउटा कारक तपाईले कति छिटो राहतको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। Dulcolax suppositories सामान्यतया केहि घण्टा भित्र काम गर्दछ तर केहि असुविधा हुन सक्छ। Dulcolax ट्याब्लेटहरू सामान्यत: to देखि १२ घण्टा भित्र राती रात राहत प्रदान गर्दछ। कोलासले आन्द्रा चाल बनाउन उत्पादन गर्न एक वा तीन दिन लिन सक्दछ।
संस्कार सहायता मा फ्लू शट को लागत
खुराक फाराम पनि महत्त्वपूर्ण कारक हो। केही बिरामीहरूका लागि रेक्टल सपोसिटरी घुसाउनु गाह्रो वा असहज हुन सक्छ जुन उनीहरू उभिन सक्छन्। जबकि सपोसिटरीहरूले छिटो काम गर्दछ, बिरामीहरूले मौखिक खुराक फारम लिन रुचाउँछन्।
कसरी भन्न को लागी यदि म ल्याक्टोज असहिष्णु छु
केवल तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले निर्णय लिन सक्दछ तपाईको लागि के सही छ। कोलास र डुलकोलेक्स डाक्टरको स्वीकृति बिना एक हप्ता भन्दा बढी लिन हुँदैन।
कभरेज र कोलास बनाम डुलकोलेक्सको लागत तुलना
कोलास एक ओभर-द-काउन्टर औषधि हो जुन सामान्यतया वाणिज्यिक वा मेडिकेयर औषधि बीमा योजनाहरूले ढाक्दैन। औसतमा, कोलासको बोतलको मूल्य १$ डलर भन्दा बढी हुनेछ। यदि तपाईंसँग प्रिस्क्रिप्शन छ भने तपाईं सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ $ 4.26 जति थोरै तिर्न सक्नुहुनेछ।
डुलकोलेक्स एक ओभर-द-काउन्टर औषधी हो जुन सामान्यतया वाणिज्यिक वा मेडिकेयर औषधि बीमा योजनाहरूले ढाक्दैन। Dulcolax सपोसिटरीको एक १२-गणना बाकसको औसत खुद्रा मूल्य लगभग $ १२ हो। यदि तपाईं आफ्नो हेल्थकेयर प्रदायकबाट प्रिस्क्रिप्शन पाउनुहुन्छ भने, तपाईं सिंगलकेयरबाट यस कुपनसँग $ 6.10 जति कम तिर्न सक्नुहुन्छ।
मानक खुराक १००, १०० मिलीग्राम सॉफ्टगेल्स १२, १० मिलीग्राम सपोसिटरीहरू
एकलकेयर लागत $ - $ १। $ $ $ १$
Colace vs Dulcolax को सामान्य साइड इफेक्टहरू
प्रतिकूल घटनाहरू कोलासको साथ दुर्लभ हुन्छन्। हल्का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रम्पिंग हुन सक्छ। उच्च खुराक र / वा लामो प्रयोगको साथ, पखाला र छाडा मल देखा पर्न सक्छ। तरल पदार्थको तयारीले घाँटीको आवरणमा जलन पैदा गर्न सक्दछ यदि प्रति निर्माताको निर्देशनहरू पतलाइएन भने।
उपचारको छोटो अवधिको लागि सामान्य खुराकमा डुलकोलेक्सले हल्का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रम्पिंग, बेहोशी, मतली, र बान्ता निम्त्याउन सक्छ। Dulcolax लामो अवधि को लागी डायरिया कारण र तरल पदार्थ र इलेक्ट्रोलाइट नोक्सान गर्न को लागी सम्भावना छ। यसले हाइपोक्लेमिया (कम पोटासियम स्तर) निम्त्याउन सक्छ जो खतरनाक हुन सक्छ। लामो उपयोगले निर्भरतामा पनि पुर्‍याउन सक्छ, र औषधि रोक्दा रिवाउन्ड कब्ज हुन सक्छ।
यस सूचीमा सबै सम्भावित साइड इफेक्टहरू समावेश नगर्न सक्छ। पूर्ण सूचीका लागि कृपया तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रम्पिंग हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
पखाला हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
बेहोशी हैन N / A हो परिभाषित छैन
मतली हैन N / A हो परिभाषित छैन
बान्ता हैन N / A हो परिभाषित छैन
इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हैन N / A हो परिभाषित छैन
स्रोत: Colace ( डेलीमेड ) Dulcolax ( डेलीमेड )
Colace vs Dulcolax को ड्रग अन्तरक्रिया
कोलास र डुलकोलेक्स फ्युरोसामाइड वा टोर्सिमाइड जस्ता लूप डायरेटिक्समा बिरामीहरूलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी ड्यूरेटिक्स पोटेशियम बर्बाद गर्दैछन्, र त्यो पोटेशियम नोक्सानीको साथ सम्भावित इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनको साथ मिलेको छ जुन डाईरियाबाट पनी परिणाम हुन सक्छ जब कोलास वा डुलकोलेक्स लिन हाइपोक्लेमिया हुन सक्छ।
कोलास खनिज तेलको साथ लिनु हुँदैन किनभने यसले खनिज तेलको प्रणालीगत शोषण बढाउन सक्छ। आंत, कलेजो, प्लीहा, र लिम्फ नोडहरूको सूजन यी साइटहरूमा खनिज तेल भण्डारबाट हुन सक्छ जुन एउटा विदेशी शरीरको प्रतिक्रिया निम्त्याउँछ।
Dulcolax इन्टरिक लेपित र ढिलाइएको विघटन हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो। एन्ट्यासीड्स, एच २ ब्लकरहरू, र प्रोटॉन इनहिबिटरहरूको साथ डुलकोलेक्स लिई पेटमा जलन वा डिस्पेप्सियाको कारण अस्थायी लेप विलम्ब हुन सक्छ। Dulcolax कम्तिमा एक घण्टा को लागी यी औषधि को प्रशासन बाट टाढा हुनु पर्छ।
यो सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको सम्पूर्ण समावेशी सूचि हुनको लागि हैन। पूर्ण सूचीका लागि कृपया तपाईको फार्मासिष्ट वा स्वास्थ्य सेवाको सल्लाहकारलाई सल्लाह दिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग रोटी Dulcolax
क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ट्यासिडहरू हैन हो
डिप्नोक्सोलेट Antidiarrheal हैन हो
हाइड्रोकोडोन ओपिएट दुखाई राहत हैन हो
निजाटिडाइन H2 ब्लकरहरू हैन हो
खनिज तेल रेचक हो हो
लान्सोप्रजोल प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू हैन हो
Colace र Dulcolax को चेतावनी
यदि तपाईं मतली, बान्ता, वा पेट दुखाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने कोलास वा डुलकोलेक्स प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ। तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग पनि परामर्श लिनुपर्दछ यदि तपाईंसँग आँखा चालहरूमा अचानक परिवर्तन आएको छ जुन दुई हप्ता भन्दा बढि चल्यो।
Dulcolax लिदा, क्र्याम्पि। र पेटको अस्वस्थता हुन सक्छ। Dulcolax ट्याब्लेटलाई कुचुर वा चबा नगर्नुहोस्, र एन्ट्यासिडहरू वा दुधको एक घण्टा भित्र Dulcolax लिनुहुन्न। यदि तपाईंसँग मल त्यागिएको छ वा डुलकोलेक्स पछि गुदा रक्तस्रावको अनुभव छ भने, यसलाई लिन रोक्नुहोस् र आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
Colace vs Dulcolax को बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Colace के हो?
Colace एक over-the-काउन्टर स्टूल सफ्टनर हो कब्ज को रोकथाम र उपचारमा प्रयोग। कोलास mg० मिलीग्राम र १०० मिलीग्राम मौखिक सॉफ्टगेल क्याप्सूल, र १० मिलीग्राम / एमएल र mg० मिलीग्राम / १ml मिलीलीटर मौखिक समाधानहरूमा उपलब्ध छ।
Dulcolax के हो?
डुलकोलेक्स एक उत्तेजक रेचक हो जुन कहिलेकाँही कब्जको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। Dulcolax इन्टरिक लेपित mg मिलीग्राम र १० मिलीग्राम ट्याब्लेटको साथै एक १०mg रेक्टल सपोसिटरीमा उपलब्ध छ।
के Colace र Dulcolax उस्तै हो?
जबकि दुबै Colace र Dulcolax कब्जको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू समान हुँदैनन् र समान रूपमा काम गर्दैनन्। कोलास, एक मल सफ्टनर, यो सजिलै पार गर्न स्टूल नरम गर्न मद्दत गर्दछ। Dulcolax, एक उत्तेजक रेचक, पाचन पथ को माध्यम बाट मल को शारीरिक आवागमन अनुकरण गरेर काम गर्दछ।
के Colace वा Dulcolax राम्रो छ?
Dulcolax कोलास भन्दा अधिक चाँडो आन्द्रा चाल उत्पन्न गर्दछ, सपोसिटरी फारम एक घण्टा वा प्रशासनको भित्र काम गर्दछ। कोलास सामान्यतया नरम हुन्छ र कम असुविधाको कारण हुन्छ, तर राहत दिनको लागि तीन दिन लिन सक्दछ।
के म गर्भवती हुँदा Colace वा Dulcolax प्रयोग गर्न सक्छु?
फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ले कोलासलाई गर्भावस्था सुरक्षा कोटि तोकेको छैन। कोलास भ्रुण विकृति का केहि मामिलाहरु संग सम्बन्धित छ, र त्यसैले मात्र जब लाभ स्पष्ट जोखिम को पछाडि प्रयोग गरीनु पर्छ। Dulcolax कुनै अवांछनीय प्रभाव देखाईएको छैन र गर्भावस्था मा छोटो अवधि को उपयोग को लागी तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिन्छ। गर्भवती महिलाहरूमा कब्ज उपचारको निर्णय गर्दा निर्जलीकरण र इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनको जोखिम तौलनु पर्छ, र तिनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सँधै परामर्श लिनु पर्छ।
म रक्सीको साथ Colace वा Dulcolax प्रयोग गर्न सक्छु?
जबकि मदिरासँग कुनै प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुँदैन, पाचन प्रणालीमा मदिराको प्रभावले डिहाईड्रेसनको जोखिमलाई बढाउन सक्छ, र रक्सी पिउँदा Colace वा Dulcolax लिँदा सावधानी अपनाउनु पर्छ।
Dulcolax एक मल नरम छ?
बिसाकोडिल युक्त डुलकोलेक्स फार्मुलेसनहरू स्टुअलन्ट रेचकको रूपमा लिइन्छ, स्टूल सफ्टेनर्स होइन। डुलकोलेक्स ट्रेड नाम अन्तर्गत स्टूल सॉफ्टरहरू उपलब्ध छन्।
स्टूल सफ्टनर र रेचक बीचमा के भिन्नता छ?
स्टूल सफ्टनरले स्टूलमा तेल र पानीको सतह तनाव कम गरेर काम गर्दछ। यसले मलमा अतिरिक्त ओसिलो बनाउँदछ, यसलाई नरम र पार गर्न सजिलो बनाउँदछ। रेचकले शारीरिक रूपमा पाचन पथको गति बढाउँदै काम गर्दछ, जसले यांत्रिक रूपमा पाचन पथको माध्यमबाट स्टल सार्दछ।
कसरी वयस्क मा एक कान को संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
के यो दैनिक स्टूल सफ्टनर लिन सुरक्षित छ?
मल कब्जा को रोकथाम र उपचार को लागी एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को निगरानी मा प्रत्येक दिन मल मलिनहरु लिन सकिन्छ। डिहाईड्रेसन र चलिरहेको पखालाका लक्षणहरूको लागि मोनिटर गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
रेवटिओ बनाम भियाग्रा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
मोबिक को सामान्य नाम के हो
4 संकेत तपाइँको मुटु समस्यामा छ
यूटीआई र खमीर संक्रमण को लागी घरेलु उपचार